Sign and Symptoms of Twin Pregnancy – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” သငျလှယျထားတာ အမှာကိုယျဝနျလား? “
အမှာကိုယျဝနျဆိုသညျမှာ သန်ဓသေားတဈဦးထကျပိုတဲ့ နှဈမှာ သုံးမှာ စသဖွငျ့ ဆိုလိုပါတယျ။
မမေလေောငျးတို့ ကိုယျဝနျရှိပွီဆိုတာနဲ့ သားသားလား မီးမီးလား သိခငျြကွသလို….အမှာဟုတျ မဟုတျလညျးသိခငျြကွပါတယျ။ခတျေလေးတို့ သဈလေးတို့လိုခဈြစရာအမှာလေးတှကွေညျ့ပွီး အမှာကိုယျဝနျ လိုခငျြသူမမေတှေရှေိသလို ၊ ကလေးနှဈယောကျသုံးယောကျတဈပွိုငျတညျးမှေးရတာ ဝနျပိလို့ အမှာမလိုခငျြသူတှလေညျး ရှိရဲ့။
သငျ့မိသားစုမြိုးရိုးထဲမှာ အမှာမှေးဖူးတဲ့သူရှိရငျ သငျ့မှာလညျး အမှာကိုယျဝနျရနိုငျခြေ (အခွားသော မြိုးရိုးမရှိသူတှထေကျ) ပိုမြားပါတယျ။
ကိုယျဝနျဆောငျနစေဉျ အောကျပါလက်ခဏာလေးတှေ ခံစားနရေပွီဆိုရငျတော့ အမှာလေးဖွဈဖို့မြားနပေါပွီ:
ပုံမှနျကလေးတိုးရမယျ့အခြိနျ (ကိုယျဝနျ15-16 ပတျ)ထကျစောတိုးခွငျး
အမှာဟုတျ / မဟုတျ သခြောသိနိုငျမယျ့ တဈခုတညျးသောနညျးလမျးကတော့ အာထရာဆောငျး အဖွပေဲဖွဈပါတယျ။
အကယျ၍ သငျဟာ အမှာကိုယျဝနျဆောငျထားရပွီဆိုရငျတော့ ပုံမှနျကိုယျဝနျတှထေကျ ပိုဂရုစိုကျဖို့လိုအပျပွီး၊ မိခငျရဲ့ကနျြးမာအခွေအေနေ…ကလေးရဲ့အရှယျအစား၊အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး မှေးဖှားမယျ့နညျးလမျးကိုလညျး သားဖှားမီးယပျဆရာဝနျနဲ့သခြောဆှေးနှေးတိုငျပငျရမှာဖွဈပါတယျ။အမှာကိုယျဝနျဟာ သတျမှတျမီးဖှားရကျထကျ စောမှေးနိုငျခလြေညျးမြားတာကွောငျ့ ဆေးရုံရကျခြိနျးပုံမှနျပွပွီး ဆရာဝနျရဲ့ညှနျကွားခကျြကို စနဈတကလြိုကျနာဖို့အရေးကွီးပါတယျ။
” သင်လွယ်ထားတာ အမွှာကိုယ်ဝန်လား? “
အမွှာကိုယ်ဝန်ဆိုသည်မှာ သန္ဓေသားတစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ နှစ်မွှာ သုံးမွှာ စသဖြင့် ဆိုလိုပါတယ်။
မေမေလောင်းတို့ ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ သားသားလား မီးမီးလား သိချင်ကြသလို….အမွှာဟုတ် မဟုတ်လည်းသိချင်ကြပါတယ်။ခေတ်လေးတို့ သစ်လေးတို့လိုချစ်စရာအမွှာလေးတွေကြည့်ပြီး အမွှာကိုယ်ဝန် လိုချင်သူမေမေတွေရှိသလို ၊ ကလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်တစ်ပြိုင်တည်းမွေးရတာ ဝန်ပိလို့ အမွှာမလိုချင်သူတွေလည်း ရှိရဲ့။
သင့်မိသားစုမျိုးရိုးထဲမှာ အမွှာမွေးဖူးတဲ့သူရှိရင် သင့်မှာလည်း အမွှာကိုယ်ဝန်ရနိုင်ချေ (အခြားသော မျိုးရိုးမရှိသူတွေထက်) ပိုများပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ် အောက်ပါလက္ခဏာလေးတွေ ခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ အမွှာလေးဖြစ်ဖို့များနေပါပြီ:
ပုံမှန်ကလေးတိုးရမယ့်အချိန် (ကိုယ်ဝန်15-16 ပတ်)ထက်စောတိုးခြင်း
အမွှာဟုတ် / မဟုတ် သေချာသိနိုင်မယ့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့ အာထရာဆောင်း အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ဟာ အမွှာကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကိုယ်ဝန်တွေထက် ပိုဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ မိခင်ရဲ့ကျန်းမာအေခြေအနေ…ကလေးရဲ့အရွယ်အစား၊အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မွေးဖွားမယ့်နည်းလမ်းကိုလည်း သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်နဲ့သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမွှာကိုယ်ဝန်ဟာ သတ်မှတ်မီးဖွားရက်ထက် စောမွေးနိုင်ချေလည်းများတာကြောင့် ဆေးရုံရက်ချိန်းပုံမှန်ပြပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကို စနစ်တကျလိုက်နာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။